फेरि घट्यो अर्को अचम्मकाे घटना : मृ’त भनेर प्रमाणपत्र सहित पठाएका शिशु बाटोमा एक्कासी दिसा गर्दै छटपटाउन थालेपछि… – PathivaraOnline
Home > समाज > फेरि घट्यो अर्को अचम्मकाे घटना : मृ’त भनेर प्रमाणपत्र सहित पठाएका शिशु बाटोमा एक्कासी दिसा गर्दै छटपटाउन थालेपछि…
admin March 5, 2020 समाज	0
काठमाडौं । चिकित्सकहरुले गरेको गम्भीर गल्तीको खुलासा भएको छ । उदयपुरको एमबी अस्पतालमा डाक्टरहरूको लापरवाहीको एउटा चकित पार्ने घघटना बाहिर आएको छ । मंगलबार साँझ डाक्टरहरूले नवजात शिशुलाई मृत घोषित गरेर परिवारलाई हस्तान्तरण गरे । परिवार नवजात शिशुसँग घर फर्कदै थियो, बाटोमा हजुरआमाको काखमा बच्चाले दिसा गरेपछि सबै हैरान भएका हुन् । त्यसपछि हजुरआमाले शिशुले सास फेरीको सहसुस गरिन् ।
तुरुन्त नवजातलाई अस्पतालमा लगिन् । डाक्टरहरूले त्यहाँ उनको सास चलिरहेको जानकारी पाए । नवजात शिशुलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्न थालियो । यद्यपि बुधवार बिहान नवजात शिशु लगभग १२ घण्टा पछि यो संसारबाट विदा भए । राजस्थानको उदयपुरको नौवा पञ्चायती खड्रा का वाडामा बस्ने लोकेश गेमेटीकी पत्नी ममताले मंगलबार प्रसव पिडा भएको थियो । परिवारले उनलाई बिहान ११ बजे चाँदेसरा अस्पतालमा पुर्‍याए । जहाँ उनलाई भर्ती गरिएको थियो, यहाँ साँझ ४ बजे उनले बच्चालाई जन्म दिइन् ।
अस्पतालमा उपस्थित नर्सिङ स्टाफले परिवारलाई भने कि बच्चालाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ । तपाँईहरु उदयपुर अस्पताल जानुहोस् भनेर एम्बुलेन्समार्फत उदयपुर रेफर गरिएको थियो । लोकेश साँझ ७ बजे नवजात शिशुसँग एमबी अस्पताल पुगेका थिए । अस्पतालका स्टाफका अनुसार उनले नवजात शिशुको मृत्यु भएको खबर मात्रै पाएनन् नवजात शिशुको मृत्यु प्रमाण पत्र पनि हातमा आयो ।
परिवार बच्चा लिएर घर आउँदै थियो । हजुरआमा मांगीबाइ गेम्तीले भनिन् , ‘बच्चालाई मेरो छातीमा टाँसिरहन्छु । बच्चाले सास फेर्यो । केही समय पछि उसले दिसा गर्यो यति भएपछि बच्चा जीवित छ भनेर उनी विश्वस्त भइन् । उदयपुरबाट नौवा पुग्न उनलाई एक घण्टा लाग्यो । साँझ ७ बजे परिवारले गाउँको स्वास्थ्य केन्द्रमा बच्चा लगेर देखाए । त्यहाँ उपस्थित नर्सिङ स्टाफले बच्चाको सास जाँच गरिन् । यस्तो अवस्थामा परिवारले नवजात शिशुलाई एम्बुलेन्सबाट राती साढे ९ बजे चन्देसरा अस्पतालमा पुर्याए ।
उक्त अस्पतालमा अक्सिजन सिलिन्डर थिएन । डाक्टरहरू पनि त्यहाँ थिएनन् । करीव डेढ घण्टासम्म, नवजात शिशुलाई सास फेर्न गाह्रो भयो जस्ले उसको परिवार चिन्तित भए । यस पछि, बच्चालाई उदयपुरको अर्को अस्पतालमा लगियो । नवजात शिशुलाई त्यहाँ भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो ।नवजात शिशु रातभर भेन्टिलेटरमा बसे र बिहान ५ः३० बजे मृत अवस्थामा फेला परेका थिए । एमबी अस्पतालका डा. लखन पोसवालले भने कि नवजात शिशुलाई ल्याउँदा सास फेर्दै थिएन । सुई लगाउँदा पनि कुनै चाल नपाएपछि घर पठाइएको थियो ।
मकवानपुरमा जन्ती बोकेको बस दुर्घटना, ३ जना जन्तीकाे गयो ज्यान!
लकडाउनमा सँगै बसेकाे श्रीमतिकाे बारम्बार केटाको फोन आएपछि श्रीमानले फालिदिए सिम, रिसाएर दुधे बालक छोडेर हिंडेकि श्रीमति ४ दिन देखि फर्किनन् (भिडियो)
६ वर्षसम्म ‘लिभ इन रिलेसन’मा बसेकि अंकिताले जब सुसान्तकाे मृ’त्युकाे खबर थाहा पाइन, लेखिन यस्तो मन छुने स्टाटस